Iindaba - Umnyhadala weLanga lokuKhanyisa!
NgoLwesihlanu, nge-26 kaFebruwari, 2021 ngumnyhadala weLantern kuwo onke amaTshayina. Ngumthendeleko owonwabileyo. Ngokukodwa ubusuku bunomtsalane.
Ngale mini, abantu baxhoma isibane, babeke iqhina phantsi kwaso. Emva koko kuza umdlalo: qagela iqhina!
Lowo uqashisela iqhina ekunene uya kuphumelela amabhaso. Kufana nomdlalo wePK ogcwele ukwazi kwaye uhleka kunye nolonwabo.
Kukwakho noluhlu lwemisebenzi yesintu efana nokujonga izibane, ukutya amadombolo, nokucima umlilo.
Ngokuhlwa, izibane ziya kulayita. Yenza ubusuku obuhle!
Apha sinqwenela wonke umntu abe neLantern Festival elungileyo!
Ulwazi: Umsebenzi kunye nembali ye-Lantern festival:
Umnyhadala wesibane uyatyiwa ngomhla we-15 wenyanga yokuqala yenyanga. "IYuanxiao" isetyenziswe njengokutya ixesha elide kwilizwe lethu. Kwingoma yoBukhosi, ukutya kwinoveli kuMthendeleko weLanga kwathandwa phakathi kwabantu. Olu hlobo lokutya lwabizwa okokuqala ngokuba yi- "Floating Yuanzi" kwaye kamva kwathiwa "Yuanxiao", kwaye noosomashishini bayibiza ngokuba yi "Yuanbao". Umnyhadala weLantern usebenzisa iswekile, iiroses, isesame, intlama yeembotyi, isinamon, iinkozo zomnatha, amandongomane, incindi yejuzi kunye nokunye ukuzalisa. Ukuzaliswa kuyenziwa kwaye kusongelwe kumgubo ocoliweyo welayisi. Iibhola zerayisi ezi-glutinous ziqala ukwenziwa zibe zizikhumba ngomgubo werayisi omuncu. Yenziwe ngokuhlohla, kwaye indlela yahluke ngokupheleleyo. I-Lantern Festival inokuba yinyama okanye imifuno, eneencasa ezahlukeneyo. Ingabiliswa kwisuphu, eqhotswe nzulu, kwaye iyabiliswa.
Ukuqagela iimfumba zezibane zikwabizwa ngokuba ziimfumba zelanga. Ngumsebenzi wesintu weLantern Festival. Iimfumba zezibane zaziphuhlisiwe kwasekuqaleni zisuka kwizintsonkotha kwaye zavela ngeNtwasahlobo naseKwindla nakwixesha leMfazwe. Iqhina lixhomeke kwisibane ukuze abantu baqashele kwaye badubule. Kwaqala kwi-Dynasty yeNgoma yaseZantsi. Ingoma yaseZantsi yeZhou Mi "Izinto ezindala malunga nobuGcisa beMfazwe?" "I-Deng Pin" iirekhodi: "Sebenzisa izibane zesilika ukusika imibongo, ukuhlekisa, kunye nokupeyinta abalinganiswa, intetho efihliweyo yentloko, kunye nolwimi lwaseBeijing, uhlekisa abahamba ngeenyawo." Lantern Festival, isixeko umlawuli zange ebusuku, Spring Festival Lantern Festival, abantu Iintlobo ngeentlobo, imibongo, namaqhina, iincwadi ezisesibaneni, kubonakala kwikhandlela, zidweliswe kwi indlela, ukuvumela abantu ukuba baqashele, ngoko ke ibizwa ngokuba "ngeemilo zelanga"
Lo msebenzi ubaluleke kakhulu kubantu bokulima. Kuba iimpuku zihlala zitya imibungu emikhulu yesilika ebusuku, abantu bevile ukuba xa besondla iimpuku ngesidudu serayisi ngomhla weshumi elinesihlanu wenyanga yokuqala yenyanga, banokutsiba imibungu yesilika. Ke ngoko, aba bantu babilisa imbiza enkulu yesidudu esibhityileyo ngomhla weshumi elinesihlanu wenyanga yokuqala yenyanga, kwaye abanye babo bayigquma ngengqimba yenyama. Ngelixa ufunda igama, uthuka impuku ukuba itye usana lwe-silkworm ukuze kube nzima ukufa.